အမျိုးသမီးအင်္ဂါဇာတ်တင်းကျပ်များအတွက်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ Gynecologicalgel - နှုတ်ခမ်း | မျက်စိ Cream| facial မျက်နှာဖုံး |L ကို Otion | facial Cream | မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ OEM / လိမ္မော်ရောင်, လက်ကားအရောင်း
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » အမျိုးသမီးအင်္ဂါဇာတ်တင်းကျပ်များအတွက်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ Gynecologicalgel
လုပ်ဆောင်ချက်: Vaginal Tightening,PH balance
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝ:2နှစ်ပေါင်း
Net: 3g or customized
အရောင်: ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော,gold,or customized
MOQ: 50000 အပိုင်းပိုင်း
ပါဝင်သောအရာ: Natural Herbs Extraction
Supply နိုင်ခြင်း： 5000000 နေ့နှုန်းအပိုင်းအစ / ပိုငျးပိုငျး
ထုပ်ပိုး & ပို့ခြင်း စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုး, ပို့ကုန်ထုပ်ပိုး
ဆိပ်ကမ်း Foshan ဆိပ်ကမ်းကို / ကွမ်ကျိုးဆိပ်ကမ်းကို
အရှေ့. အချိန်(ရက်ပေါင်း) 20 ညှိနှိုင်းရမည့်
ထုတ်ကုန်အမည် Vaginal Tightening Gynecological gel
အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ Natural Herbs Extraction
လုပ်ဆောင်ချက် Vaginal Tightening,PH balance
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝ Two years
ကျား, မ အမြိုးသမီး
3g, 10g, 30g, 100g, စသည်တို့.
Sophora ထုတ်ယူ, Honeysuckle ပန်းပွင့်ထုတ်ယူ, cnidium ထုတ်ယူမှု, ရှားစောင်းလက်ပတ်ထုတ်ယူ, စသည်တို့.
အရောင် / အမွှေးအကြိုင် / ကိုက်ညီမှု
မေး: ကျနော်တို့ OEM မိန့်လိုပါက, အမိန့်အရေအတွက်အပေါ်မည်သည့်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်(MOQ)?
တစ်ဦးက: အဆိုပါ MOQ အကြီးအကျယ်သင်ရွေးချယ်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်. မည်သို့ပင်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား, ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးသင်၏လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးကောင်းထုတ်ကုန်ပူဇော်.
မေး: ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် packages များပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုရှိနိုင်ပါသည်?
တစ်ဦးက: ဟုတ်ကဲ့. သငျသညျပြီးသားသင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြပါလျှင်, you can send us the stickers or provide your design so we can print it on the packages.(MOQ တစ်ခုချင်းစီကိုအထုပ်အဘို့ရှိပါတယ်).
မေး: အဆိုပါပေးပို့အချိန်ဆိုတာဘာလဲ ?
တစ်ဦးက: အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ပုံမှန်အားဖြင့် 15 ~ 30 ရက်, detail delivery date should be decided according to production season and order quantity.
တစ်ဦးက: ကျနော်တို့အမြန်ခြင်းဖြင့်တင်ပို့မည်. ထိုသို့သော FedEx အဖြစ်, DHL, TNT, စသည်တို့ကို(လေကြောင်းခရီးဖြင့်သို့မဟုတ်ပင်လယ်နားမှာက)
1. custom ရေးဆွဲရေး
2. custom ထုပ်ပိုး
3. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် MOQ
5. အခမဲ့နမူနာများကို ———— Click to ask for sample orders
6. Third-party အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်း Accept
7. ရရှိနိုင် OEM / လိမ္မော်ရောင်
ဆေးဖက်ဝင်အပင်များအရည်အမျိုးသမီးရငျးနှီးလိင်အင်္ဂါဂျယ်, ရောင်ရမ်းဆန့်ကျင်ရောင်ရမ်း detox antibacterial လိင်အင်္ဂါသန့်ရှင်းရေးဂျယ် OEM
ဆေးဖက်ဝင်အပင်များfemဝရငျးနှီးရငျးနှီးဆေးကြောမှုပမာဏဟန်ချက်ညီစေသည့်ပိုးမွှားအပျိုစင်လိင်အင်္ဂါအခေါင်းတင်းဂျယ်လ် OEM / ODM
အိတ်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးရငျးနှီးရေချိုး, ဂျင် OEM တင်းကျပ်လိင်အင်္ဂါ antibacterial အနံ့ hymen